Akụkọ - Workingkpụrụ Ọrụ nke Nkpụzi Ebu na Usoro Ya.
Workingkpụrụ Ọrụ nke Nkpụzi Ebu na Usoro Ya.
Na ebu n'ichepụta usoro, akpụ akụkụ nke ebu mgbe mkpa ka a na-elu-egbu maramara. Ingmụta nkà na ụzụ polishing nwere ike melite ogo na ndụ ọrụ nke ebu ma si otú a melite ogo ngwaahịa a. Isiokwu a ga-ewebata na-arụ ọrụ ụkpụrụ na usoro nke ebu polishing.
1. Ebu polishing usoro na-arụ ọrụ ụkpụrụ
Ọkpụkpụ akpụzi na-ejikarị eriri nkume mmanụ, wiilị ajị anụ, sandpaper, wdg, nke mere na elu ihe ahụ gbanwere nke ọma ma wepu akụkụ convex nke elu nke ọrụ ahụ iji nweta ihu ọma, nke a na-ejikarị aka eme . Usoro nke ibu-mma-egweri na polishing a chọrọ maka elu n'elu mma. Super-mma-egweri na polishing ka nke a pụrụ iche-egweri ngwá ọrụ. Na mmiri mmiri na-egbuke egbuke nke nwere abrasive, a na-apịa ya megide igwe akụrụngwa iji rụọ ọrụ ntụgharị dị elu. Polishing nwere ike nweta ihe ike nke Ra0.008μm.
2. Usoro polishing
(1) mkpachasị anya
Ngwaọrụ dị mma, EDM, egweri, wdg nwere ike ịchacha ya na polis nke na-agba gburugburu yana ọsọ ntụgharị nke 35 000 ruo 40 000 r / min. Mgbe ahụ enwere mmanụ ntuziaka na-egweri ntuziaka, warara nke mmanụ mmanụ tinyere mmanụ ọkụ dị ka mmanu mmanu ma ọ bụ igwe jụrụ oyi. Usoro ojiji bụ 180 # → 240 # → 320 # → 400 # → 600 # → 800 # → 1 000 #.
(2) ọkara mma polishing
Imecha ọkara na-ejikarị ájá sand na manu oku. Nọmba nke sandpaper dị n'usoro:
400 # → 600 # → 800 # → 1000 # → 1200 # → 1500 #. N'ezie, # 1500 sandpaper naanị jiri ebu nchara adabara maka mgbatị (n'elu 52HRC), na adabaghị maka nchara siri ike, n'ihi na ọ nwere ike ibibi elu nke nchara siri ike ma enweghị ike nweta nsonaazụ polishing achọrọ.
(3) Ezi polishing
Ezi polishing tumadi na-eji diamond abrasive tapawa. Ọ bụrụ na-egweri na a polishing ákwà wheel na-agwakọta diamond abrasive ntụ ntụ ma ọ bụ abrasive tapawa, na mbụ-egweri iji bụ 9 μm (1 800 #) → 6 μm (3 000 #) → 3 μm (8 000 #). The 9 diamondm diamond tapawa na polishing ákwà wheel nwere ike iji wepu ntutu akara site na 1 200 # na 1 50 0 # sandpaper. A na - emezi polishing ahụ na mmetụta na mado diamond na usoro nke 1 μm (14 000 #) → 1/2 μm (60 000 #) → 1/4 μm (100 000 #).
(4) Polish na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi
The polishing usoro a ga-rụrụ iche iche na abụọ na-arụ ọrụ ebe, ya bụ, na o siri ike egweri nhazi ọnọdụ na ezi polishing nhazi ebe na-iche, na-elekọta kwesịrị iwere ọcha ájá ahụ fọdụrụ n'elu nke workpiece na aga usoro.
N'ozuzu, mgbe ejiri mmanụ na-acha ọkụ na 1200 # sandpaper, a ga-eme ka ihe a na-eme ka ọ dị ọcha na-enweghị ntụ, na-achọpụta na ọ dịghị ájá dị n'ikuku na-agbaso ọkwa ahụ. Enwere ike ịme ihe ziri ezi karịa 1 μm (gụnyere 1 μm) n'ime ụlọ na-acha ọcha. Maka ịkpụchasị akọwapụta ọfụma, ọ ga-abụrịrị ebe dị ọcha, ebe uzuzu, anwụrụ ọkụ, dandruff na ụmụ irighiri mmiri nwere ike ihichapụ ihu dị elu.
Mgbe polishing usoro na dechara, elu nke workpiece kwesịrị-echebe site na ájá. Mgbe usoro nchacha ahụ kwụsịrị, a ga-ewepụsị abrasives na mmanu niile nke ọma iji hụ na arụ ọrụ ahụ dị ọcha, mgbe ahụ, a ga-agbasa oyi akwa nke mkpuchi mgbochi nchara n'elu ebe ahụ.